ပါဝင်မှု - သတင်းအချက်အလက်၊ အောက်ခြေမှအစပြုသည့်သုတေသနပြုမှု (Pohnin's Porn) ၏လေ့လာမှု (Kohut et al, 2017) - "Pornography ၏စုံတွဲဆက်ဆံရေးအပေါ်သိသာသောသက်ရောက်မှုများ - ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း"
"ဟုအဆိုပါလင်မယားဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ခံစားသက်ရောက်မှု: ပွင့်လင်း-အဆုံးသတ်, ပါဝင်သူ-အကြောင်းကြား, Bottom-Up ကိုသုတေသနကနဦးတွေ့ရှိချက်" ၏ analysis (Kohut et al, 2017 ။ )
မှတ်ချက်များ YBOP: ဒီနောက်ကွယ်ကရည်ရွယ်ချက်ကို Is တေလာ Kohut လေ့လာမှု (ကြိုးပမ်းမှုမှ) တန်ပြန်ဖို့ porn အသုံးပြုမှုဆက်ဆံရေးအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပြီးပြသသော 80 လေ့လာမှုများကျော်? အဆိုပါနှစ်ဦးကိုမူလတန်းအတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကို (? နည်းဗျူဟာ) ဒီလေ့လာမှုနေသောခေါင်းစဉ်:
အဖြစ်မှန်? မှဒေတာများ အကြီးဆုံး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုယ်စားလှယ် အမေရိကန်စစ်တမ်း (အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်း) ထိုအစီရင်ခံတင်ပြ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးသာ 2.6% သည်လွန်ခဲ့သောလတွင်တစ်ဦး "ညစ်ညမ်း website မှာ" သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ 2000 ကနေဒေတာများ - 2004 (အသေးစိတ်မြင်ဘို့ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေး, 2014) ။ ဤနှုန်းသည်နိမ့်ကျနေပုံရသော်လည်းအောက်ပါအချက်များကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ - (၁) အိမ်ထောင်သည်မိန်းမများ၊ (၂) သည်အသက်အရွယ်အုပ်စုအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုသည်၊ "သို့မဟုတ်" ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကညစ်ပတ်သွားရောက်ခဲ့သည် ") ။
2) လေ့လာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအကဲဖြတ်မဆို variable ကိုနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမပတျသကျဘူး။ အဲဒီအစား, မေးခွန်းများကို "နောက်ဆုံးသူ့ကိုဖွင့်လှစ်" အလုပ်လေ့လာမှု ဘာသာရပ် porn နှင့်ပတ်သက်ပြီးပေါ်နှင့်အပေါ် ramble နိုင်ရှိရာ (ကအရေအတွက်ထက်အရေအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်) ။ ထိုအခါသုတေသီများ ramblings ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်တကယ်တော့ပြီးနောက်, အဘယျသို့အဖြေကို "အရေးကြီးသော" ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏စက္ကူတွင် (လှည့်ဖျား?) သူတို့ကိုမည်သို့တင်ပြခဲ့ကြသည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါသုတေသီများသည်ပိုမိုခိုင်မာတောင့်တင်းသောအလုပ်သမားများနှင့်သိပ္ပံနည်းကျနည်းနာများနှင့်ညစ်ညမ်းမှု၏သက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောရိုးရှင်းသည့်မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်သောအခြားလေ့လာမှုများအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုပြုရန်ရှိသည်။ ချို့ယွင်းချက်။ ဒီကယ့်ကိုသိပ္ပံလား? ဦးဆောင်ရေးသားသူရဲ့ က်ဘ်ဆိုက် နှင့်သူ၏ ရန်ပုံငွေရှာမှာကြိုးပမ်းမှု မအဖြစ်အနည်းငယ်မေးခွန်းများကိုမြှင့် Kohut မှပြောကြားခဲ့သည့်သူ၏ ၂၀၁၆ လေ့လာမှုသည်သာတူညီမျှဖြစ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအားနည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုဆိုခဲ့သည် အားဖြင့်တု (ကတွေ့ရှိချက် နီးပါးသည်အခြားလေ့လာမှုအစဉ်အဆက်ထုတ်ဝေ).
UPDATE: ၂၀၂၁ လေ့လာမှုက“ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏သက်သေသာဓကအဖြစ်အသုံးပြုသူများ၏ထုတ်ကုန်ထောက်ခံချက်များကိုမေးခွန်းထုတ်ရန်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက် [ဤ YBOP စာမျက်နှာတွင် Kohut လေ့လာမှုကိုညွန်ပြသည်]။ "See ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမကျေနပ်မှု - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှောက်ယှက်ခြင်း၏အခန်းကဏ္,၊ အပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှိုင်းယှဉ်မှုများနှင့်ညစ်ညမ်းသောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ခြင်း (၂၀၂၁)).
၂၀၂၁ လေ့လာမှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုသတိပေးသည် 80 ကျော်လေ့လာမှုများဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။ (လေ့လာမှု ၁၊ ၂၊ ၃ တွင် meta-analysis၊ လေ့လာချက် ၄ တွင် porn အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို ၃ ပတ်ကြာဖြတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလေ့လာမှု ၅ မှ ၁၁ အထိသည် longitudinal ဖြစ်သည်။ အဖြစ်ဝေးငါတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ် porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ အနည်းငယ်လေ့လာမှုများအနည်းငယ် သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမှအမျိုးသမီးအတွက် သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းကြစဉ်တွင်, လေ့လာမှုများ၏ကျယ်ပြန့်အများစုရှိသည်မဟုတ် (ဒီစာရင်းကိုကြည့်ရှု: arousal အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေး: အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များပါဝင်သော porn လေ့လာမှုများ).
ဒီလေ့လာမှုအကြောင်းနည်းနည်းပိုပါတယ်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း၏ဇနီးမောင်နှံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အဖွင့်မေးခွန်း ၄၂ ခုအားဖြေဆိုရန် ၃၉၆၃ ခုဖြေဆိုသူ ၄၃၀ ဦး ရှိခဲ့သည်။ သုတေသီများသည်“ အကြောင်းအရာများ” ၆၆ ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီသည်တုံ့ပြန်မှု ၆၁၁ မှ ၅ ခုကြားတွင်ရှိသည်။ ဒီဆိုးဝါးတဲ့အားနည်းချက်တွေရှိနေပေမယ့်အချို့နမူနာတွေကဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိနေပေမယ့်သုတေသီတွေက porn ရဲ့သက်ရောက်မှုကအတော်လေးအပြုသဘောဆောင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
: အချို့စုံတွဲများ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေသိသိသာသာအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုကနေအနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်
porn Partner အစားထိုး: 90 တုံ့ပြန်ချက် ညစ်ညမ်းအစားထိုးခံခဲ့ရသည်သောအမြင်ပါဝင်ပတ်သက်သို့မဟုတ် Partners နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ လိင်။ တချို့ကတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ညစ်ညမ်းပိုမိုလွယ်ကူ, ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ပိုပြီး arousal ပို. နှစ်လိုဖွယ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအဖော်နှင့်အတူလိင်ထက်ပိုဝမ်းမြောက်စေပြီးဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြခြင်းဖြင့်တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်အချို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကသူတို့ညစ်ညမ်းနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မှု၌ရှိကြ၏ကဲ့သို့မိမိတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ '' ခံစားရပေမည်ထောက်ပြ
arousal တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွား: 71 တုံ့ပြန်ချက် , ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု desensitizing မည်သို့ဆွေးနွေးကြသည်အောင်မြင်ရန်နိုင်စွမ်းလျော့ကျသို့မဟုတ် လိင်စိတ်နိုးထထိန်းသိမ်းရန်, ဒါမှမဟုတ်အော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်။ Decrease အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူထပ်တူလိင်ရှိဒါအဖြစ်အထက်မှတ်ချက်ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုတုံ့ပြန်မှုကနေစစ်မှန်တဲ့ arousal တုံ့ပြန်မှုခွဲခြားဖို့တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲနိုင်ပါတယ်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desensitization (subtheme): 17 တုံ့ပြန်ချက်၏ 71 ကြောင်းအထူးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ် desensitization ဖော်ပြခဲ့သည်။ မကြာခဏဆက်စပ်ကြောင့်ခက်ခဲပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွင်ထံမှအများကြီးအဓိပ္ပာယ်ကိုအခြမှအောင်, မရေဖြစ်ပါတယ်။ တခြားနေရာတွေမှာကအတိအလင်းချို့ယွင်းလိင်စိတ်နိုးထချိတ်ဆက်
စွဲ: 60 တုံ့ပြန်ချက် obsessive ဖြစ်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးလိင်စှဲလမျးသူဖြစ်လာသုံးပြီး '' မှီခို '', ပတ်ပတ်လည်အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှု revolved 'သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်း, ညစ်ညမ်းအပေါ်မှီခို။ ဒီဝေါဟာရဒီနမူနာထဲမှာစွဲ၏ဆွေးနွေးမှုများအတွက်ကွာခဏအသုံးပြုခဲ့သည်သော်လည်းအဆိုပါမှီခိုနှင့်မှီခိုဝေါဟာရများနှင့်အတူသီအိုရီဆက်သွယ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့် arousal အဖြစ် desensitization လျော့နည်းသွားအကြံပြု
နီးစပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မတ်ေတာသညျဆုံးရှုံး: 42 တုံ့ပြန်ချက် ရငျးနှီးသို့မဟုတ်မေတ္တာတစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းသက်ဆိုင်ရာ။ တုံ့ပြန်မှု၏ဤအမျိုးအစားအချို့မတူကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ အခြားသူတွေကိုသူတို့ဖက်ဆက်ဆံရေးအတွက်အကွာအဝေးဖန်တီးပေးသောသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှု, ကြိုက်နှစ်သက်တော်မမူကြောင်းဆိုပါတယ်စဉ်အချို့ကိုညစ်ညမ်းချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ရငျးနှီးမှုနှင့် ပတ်သက်. လိင်ပိုပြီးအပန်းဖြေနည်းစေသည်ညွှန်ပြ။ မှတ်ချက်များကိုတစ်စုံတွဲအကွာအဝေးတပ်မက်လိုချင်သောအညစ်ညမ်း-မှုတ်သွင်းအပြုအမူနှင့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူအမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားကွာဟမှုတစ်ခု function ကိုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အနည်းဆုံးသင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရငျးနှီးတဲ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင်းအကြံပြု
ယုံကြည်မှုများ: 29 တုံ့ပြန်ချက် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုယုံကြည်မှုများသို့မဟုတ်ပျက်စီးသွားသောယုံကြည်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်မည်သို့မည်ပုံဆွေးနွေးတင်ပြ
28 တုံ့ပြန်ချက်: လိင်နှင့်လိင်အကြောင်းကျပုံစံအား sexism, အမျိုးသမီးများ၏အထီးလွှမ်းမိုးမှုကိုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းမှအလှူငွေ, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏အားဖြည့်များ၏စိုးရိမ်ပူပန်ညစ်ညမ်းရဲ့တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးခဲ့ကြသည်
ပျက်ဆီးနေသောဆက်ဆံရေး: 28 တုံ့ပြန်ချက် ဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖော်ပြထားသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးကို, လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်လိင်ဘဝအပေါ် strain တတ်၏။ အဆိုပါမိတ်ဖက်ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့်လူပေါင်းတစ်ဖက်ကနေလျော့နည်းလိင်ချင်သလဲဆိုတာအချို့ဆွေးနွေးမှုရှိခဲ့သည်
relationship ဖျက်သိမ်း: 23 တုံ့ပြန်ချက် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအထောက်အကူပြုသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာဖျက်သိမ်းဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့ပါဝင်ပတ်သက်။ ဒီအကျိုးဆက်အဘို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်သောအကြောင်းပြချက်များကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်: porn ဖောက်ပြန်ကိုအထောက်အကူပြုရန်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သောဖောက်ပြန်အဖြစ်ကိုရိပ်မိသည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ဒါမှမဟုတ် porn အသုံးပြုမှုကိုလက်ရှိမိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရှိခြင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုအရှုံးစေပါတယ်
ရီးရဲလ်လိင်၏လျော့နည်းပျော်မွေ့: 17 တုံ့ပြန်ချက် ညစ်ညမ်းအစစ်အမှန်လိင်ကပိုပျင်းစရာကောင်းစေသည်ကြောင်းအကြံပြုပိုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နည်းထွက်ပေါက်, သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း ပျော်စရာ။ တုံ့ပြန်မှု၏တစ်ဦးကလူနည်းစုရငျးနှီးတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖော်ပြထား, ဒါမှမဟုတ်အတူတကွလိင်ဆက်ဆံ၏အစိတ်အပိုင်းမေတ္တာရှင်
17 တုံ့ပြန်ချက်: Partner အတူလျော့နည်းကျေနပ် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းစေတယ်လေ, ဒါမှမဟုတ်နှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှု, ဒါမှမဟုတ်အဘို့အလိုဆန္ဒ, ဒါမှမဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုဖော်ပြကြပါသည်။ သူတို့ porn သို့မဟုတ် porn ကြယ်များနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မှု၌ရှိကြ၏နဲ့တူအပေါင်းအဖေါ်များခံစားရ
Update ကို 2018: ဒီ 2018 တင်ဆက်မှုအတွက်ဂယ်ရီ Wilson ကဒီလေ့လာမှုအပါအဝင်5မေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများ, (နောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖျောထုတျKohut et al ။ , 2017): porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
ထိတ်လန့်စရာ update ကို 2019: စာရေးဆရာများဖြစ်သူ Taylor Kohut, Lorne Campbell နှင့် William Fisher တို့သည်တရားဝင်မဟာမိတ်များအဖြစ်တရားဝင်ပူးပေါင်းပါဝင်သည့်အခါသူတို့၏ပြင်းထန်သောအစီအစဉ်များအပေါ်ဘက်လိုက်မှု နီကိုးလ် Prause နှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley တိတ်ဆိတ်ဖို့ကြိုးစားနေ၌တည်၏ YourBrainOnPorn.com။ Perry နှင့် www.realyourbrainonporn.com မှအခြားလိုလားသူ "ပညာရှင်များ" တွင်ပါဝင်သည် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင်။ စာဖတ်သူကိုသိသင့်ပါတယ် RealYBOP twitter (၎င်း၏ကျွမ်းကျင်သူများ၏သိသာခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ) လည်းအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းတွင်ပါဝင်နေသည် ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, ဂါယူဆပါသည် နှင့် NCOSE, Laila Mickelwait, GAIL ထမင်းစားခန်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအခြားမည်သူမဆို။ ဒါ့အပြင် David Ley နှင့်အခြား“ RealYBOP” ကျွမ်းကျင်သူနှစ်ယောက်လည်းရှိသည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္areာရီများဖြစ်သည်ဟုသုံးစွဲသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ ချီးမွမ်းကြလော့ RealYBOP twitter ကိုဖွင့်သည်) ဖြစ်ပေါ်လာသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေနှင့် RealYBOP twitter ကိုသုံးသည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, PornHub ကိုခုခံကာကွယ်ပါ (ကလေးညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများပါ ၀ င်သည်) နှင့် အသနားခံစာကိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါ ကျင်းပရန် PornHub တာဝန်ခံ.
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2017 Feb;46(2):585-602.
Kohut T1, Fisher က WA2,3, ကမ့်ဘဲလ် L2.
လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သူမှအသိပေးထားသည့်“ အောက်ခြေမှအောက်သို့” ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ရလာဒ်များကိုစုံတွဲကြားဆက်ဆံရေးကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်အရည်အသွေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။ လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနမူနာ (N = ၄၃၀) ကိုအနည်းဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသောအွန်လိုင်း (ဥပမာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်၊ တွစ်တာစသည်ဖြင့်) နှင့်အော့ဖ်လိုင်း (ဥပမာသတင်းစာ၊ ရေဒီယိုစသည်ဖြင့်) စုဆောင်းခဲ့သည်။ ) ရင်းမြစ်။ ပါဝင်သူများသည်စုံတွဲတစ်တွဲချင်းစီအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏ရလာဒ်များနှင့်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူမှုအခြေအနေတွင်သူတို့၏ဆက်နွယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးခွန်းများဖြေဆိုခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိဖြေဆိုသူနမူနာတွင်“ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိပါ” သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသည့်တုံ့ပြန်မှုများအရအပြာစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုစုံတွဲအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ၄ င်းတို့၏ဆက်နွယ်မှု (ဥပမာ - ပိုမိုကောင်းမွန်သောလိင်ဆက်ဆံမှု၊ လိင်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများ၊ လိင်မှုဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်မှု) ကိုမကြာခဏအစီရင်ခံကြသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များ (ဥပမာ - လက်တွေ့မကျသောမျှော်လင့်ချက်များ၊ မိတ်ဖက်အပေါ်လိင်စိတ်စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းလာခြင်း၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှုတိုးလာခြင်း) ကိုလည်းသိသာထင်ရှားသည့်ကြိမ်နှုန်းနည်းပါးသော်လည်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်း၏ရလဒ်များသည်စနစ်တကျအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်သုတေသနလမ်းညွှန်အသစ်များကိုအကြံပြုသည်။
KEYWORDS: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ; relationship အရည်အသွေးကို; ကြားဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု; ဆက်ဆံရေး; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း